Covid-19 ရောဂါပိုး၏ စတင်ရာကို ခြေရာခံခြင်း၊ ဇီဝလက်နက်လည်းမဟုတ် ဝူဟန်အသားစိမ်းဈေးမှလည်းမမှန် စောစောပိုင်းလများကတည်းက တရုတ်တောင်ပိုင်းတွင် စတင်ပျံနှံ့ခဲ့ဟု ဗြိတိန်မျိုးရိုးဗီဇပညာရှင်ပြော – H2Oupdatenews
Covid-19 ရောဂါပိုး၏ စတင်ရာကို ခြေရာခံခြင်း၊ ဇီဝလက်နက်လည်းမဟုတ် ဝူဟန်အသားစိမ်းဈေးမှလည်းမမှန် စောစောပိုင်းလများကတည်းက တရုတ်တောင်ပိုင်းတွင် စတင်ပျံနှံ့ခဲ့ဟု ဗြိတိန်မျိုးရိုးဗီဇပညာရှင်ပြော
oungmarine11@outlook.com 18/04/2020	No Comments
Covid-19 ရောဂါဖြစ်စေသော ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမှာ တရုတ်နိုင်ငံရှိဓာတ်ခွဲခန်းတွင်စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟု တီးတိုးပြောဆိုရာမှ လျှို့ဝှက်သီအိုရီတရပ်သဖွယ်ဖြစ်လာခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်က တစ်စုံတစ်ရာငြင်းဆိုခြင်းမပြုပဲ ကူးစက်ရောဂါ၏ မူလအစအား အသေးစိတ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်လျှက်ရှိကြောင်း ပြောဆိုသည်ဟု ဧပြီ-၁၆ ရက်နေ့ နိုင်ငံတကာမီဒီယာများက ဖော်ပြကြသည်။
ဧပြီ ၁၅-ရက်နေ့ အိမ်ဖြူတော်မီဒီယာတွေ့ဆုံပွဲ၌ ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲခန်းမှ Covid-19 ကူးစက်ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားရသည်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အမေရိကန်အစိုးရ၏ အခိုင်အမာယုံကြည်မှုအပေါ် ထင်မြင်ချက်ပေးရန် သတင်းထောက်တစ်ဦး၏ တောင်းဆိုချက်ကို ဒေါ်နယ်ထရမ့်က ယခုကဲ့သို့ ပြန်လည်ဖြေဆိုရာတွင် လူအများတွေးထင်မှုကို ပိုမိုယုံကြည်ရန်ဖြစ်လာစေသည်ဆို၏ ( Russia Todat., Apr.16,2020 )
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မိုက်ပွန်ပေယိုကလည်း အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အိမ်ဖြူတော်က အသေးစိတ်စုံစမ်းလျှက်ရှိကြောင်း၊ ဝူဟန်ဓါတ်ခွဲခန်းမှ လွတ်ထွက်လာခဲ့သည်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တရုတ်အစိုးရ အနေဖြင့် အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်ရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ SARS-CoV2 ဗိုင်းရပ်စ်သည် ဇီဝလက်နက်မဟုတ်ပဲ အမေရိကန်သိပ္ပံပညာရှင်များထက် သာလွန်ကြောင်း ပြသရန် လင်းနို့၏ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအန္တရာယ်ကို ဖော်ထုတ်ရေး သုတေသနပြုစဉ် မတော်တဆ လွတ်ထွက်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အများပြည်သူအကြား သိသိသာသာပျံ့နှံ့ကူးစက်၍ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို လူသိများလာပြီးနောက် ဝူဟန်အသားစိမ်းဈေးတန်းအား အပြစ်တင်ခြင်းဖြင့် ဖြစ်စဉ်အမှန်ကို ဖုံးကွယ်ခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုသည်။
ဒုတိယသမ္မတ မိုက်ပင့်စ်ကမူ ဝူဟန်ဓါတ်ခွဲခန်း၏ ဇီဝလုံခြုံရေးအဆင့် အားနည်းသည်ကို အမေရိကန်က ၂၀၁၈-ခုနှစ်ကတည်းကပင် သတိပေးခဲ့ကြောင်း၊ တရုတ်အာဏာပိုင်တို့က Covid-19 ရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ အချက်အလက်များ မျှဝေပေးခြင်း မရှိခဲ့သည့်အပြင် ဝူဟန်ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခန်းသို့ နိုင်ငံခြားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ ဝင်ရောက်စစ်ဆေးရန်ကိုလည်း ငြင်းပယ်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားသည်။
ပင်တာဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ကမူ SARS-CoV2 မှာ ဓါတ်ခွဲခန်းမှ ဖန်တီးသည်ဆိုခြင်းထက် သဘာဝအလျှောက်ဖြစ်လာ ပုံရကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်၍ မိမိအနေဖြင့် သေချာစွာ မသိကြောင်း ကာကွယ်ရေးပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ်များ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ကြည်းတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မတ်ခ်မီလေးက ဝန်ခံသည်။
တရုတ်အစိုးရကမူ ဝူဟန်ဓါတ်ခွဲခန်းမှ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စတင်သည်ဆိုခြင်းကို သိပ္ပံပညာရပ်ဆိုင်ရာအခြေအမြစ်မရှိပဲ ထင်ရာမြင်ရာပြောဆိုခြင်းအဖြစ် ပြင်းထန်စွာပယ်ချလိုက်ပြီး SARS-CoV2 မှာ ဓါတ်ခွဲခန်း၌ ဖန်တီးကြောင်း အထောက်အထားခိုင်လုံခြင်းမရှိဟု WHO က အကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုချက်များကို သက်သေထူခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း တရုတ်အစိုးရက COVID-19 ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားရာ ဗဟိုချက်ဖြစ်သည့် ဝူဟန်မြို့တော်၏ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အများသိပြီး သေဆုံးသူ ၃,၈၆၉ ဦးတွင် နောက်ထပ် ၁,၂၉၀-ဦး ထပ်မံတိုးမြှင့်ကာ ယခင်အရေအတွက်၏ ၅၀% အထိ ပြင်ဆင်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ယခုကဲ့သို့ဖြစ်ရသည်မှာ ယခင်က ရောဂါကူးစက်မှုစစ်ဆေးရန် ပျက်ကွက်မှုများ၊ ရှာဖွေကုသရန် နှောင့်နှေးမှု အမှားများကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေရှင်းချက်ပေးခဲ့သည်။ ( Sky News, April 17,2020 )
ယမန်နေ့ Russia Today သတင်းတစ်ပုဒ်တွင်မူ Covid-19 ကူးစက်ရောဂါနှင့် ဝူဟန်ဓါတ်ခွဲခန်းတို့ ဆက်နွယ်လျှက်ရှိကြောင်းကို မည်သည့် သက်သေအထောက်အထားမျှ ပြသနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း ပြင်သစ်သမ္မတရုံးက သတင်းထုတ်ပြန်သည်ဟု ရေးသားထားသည်။
အမေရိကန်အစိုးရနည်းတူ ပြင်သစ်သတင်းစာများကလည်း ခန့်မှန်းရေးသားကြစဉ် သမ္မတအီမန်နျူရယ်မက်ကွန်း၏ တရားဝင်ပြောဆိုချက်အရ Covid-19 ရောဂါပိုးမှာ ဝူဟန်ဓါတ်ခွဲခန်းမှ စတင်ကြောင်း ပြောဆိုချက်အားလုံးတို့ကို ကောလဟလအဖြစ် ချေဖျက်လိုက်သကဲ့သို့ ဖြစ်လာသည်။
ထိုစဉ်အတောအတွင်း SARS-CoV2 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်မှာ ဓါတ်ခွဲခန်း၌ ဖန်တီးခြင်းလည်းမဟုတ် ဝူဟန်၌ စတင်ဖြစ်ပွားသည်ဆိုခြင်းမှာလည်း မမှန်ကန်ပဲ ၎င်းထက်စော၍ တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း၌ စတင်ပျံပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဗြိတိန် ကင်းဗရစ်တက္ကသိုလ် မျိုးရိုးဗီဇပညာရှင်များက ပြောဆိုကြောင်း South China Morning Post က ယနေ့ရေးသားသည်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သည် လူတို့အပေါ် အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော SARS-CoV2 အဖြစ် ဗီဇပြောင်းလဲခြင်းမတိုင်မီ လွန်ခဲ့သည့် စက်တင်ဘာနှင့် ဒီဇင်ဘာအကြား တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း၌ စတင်ပျံ့ပွားခဲ့ကြောင်း၊ မူလကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သည် လူတို့တွင် ရောဂါမဖြစ်စေပဲ လင်းနို့ သို့မဟုတ် အခြားတိရစ္တာန် သို့မဟုတ် လူတို့တွင် လပေါင်းများစွာ တည်ရှိနေခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိရကြောင်း မျိုးရိုးဗီဇပညာရှင် ဒေါက်တာပီတာဖော့စတာက SCMP သို့ ပြောကြားသည်။
(( ယခုအတိုင်းဆိုလျှင် SARS-CoV2 ဗိုင်းရပ်စ်မှာ ဇီဝလက်နက်ဆိုခြင်းမှ ဝူဟန်ဓါတ်ခွဲခန်းမှ လွတ်ထွက်သွားjခင်းအဆင့်သို့ လျောကျသွားကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးချင်းစီသည် လူတို့၏ လက်ဗွေရာကဲ့သို့ ၂-ခုပုံစံတူမရှိတတ်၍ နောက်ကြောင်းလိုက်ရန် မခဲယဉ်းပါ။ ထို့ကြောင့် သိပ္ပံပညာရှင်များက ဓါတ်ခွဲခန်းထွက် မဟုတ်ကြောင်း အခိုင်အမာပြောဆိုကြခြင်းဖြစ်သည်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းဝင်ရောက်နိုင်သောဗိုင်းရပ်စ်တိုင်းမှာ လူ့ကိုယ်ခံအားစံနစ်ကို လှည့်စားနိုင်၍ဖြစ်သည်။ ဤတွင် AIDS ဖြစ်စေသော ဗိုင်းရပ်စ်နှင့် သဘောချင်းတူ သော်လည်း HIV ဗိုင်းရပ်စ်နှင့် ပေါင်းစပ်ယူသည်ဆိုခြင်းမှာ ပို၍ မဖြစ်နိုင်ပါ။ သိပ္ပံပညာရှင်မဟုတ်သော မီဒီယာသမားတို့၏ ထင်မြင်ချက်မျှသာဖြစ်သည်။
သို့သော် သိပ္ပွပညာရှင်လည်းမဟုတ်၊ မီဒီယာသမားလည်းမမှန်သော နိုင်ငံရေးသမားတို့ကမူ နိုင်ငံရေးတွေး တွေးကြပုံရသည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင် Covid-19 အကြောင်းပြု၍ တရုတ်အားစွပ်စွဲခြင်းမှာ ၂၀၀၂-ခုနှစ် အီရတ်အား ကျူးကျော်ထိုးစစ်မဆင်မီ ဆဒမ်ဟူစိန်က လူအများအစုအပုံလိုက်သေစေသောလက်နက်( WMD ) ထုတ်လုပ်သည် နောက်ပိုင်းအဖျားရှူးသွားသော ဂျော့ဒဗလျူဘွတ်ရှ်အား ပြန်ပြောင်းမြင်ယောင်စေကြောင်း နိုင်ငံရေး ဝေဖန်သုံးသပ်သူတို့က ပြောဆိုလျှက်ရှိပါသည်။ ။ သတင်းဘာသာပြန်သူ ))
((( Russia Today., Apr. 18, 2020.” Neither ‘lab’ nor ‘wet market’? Covid-19 outbreak started months EARLIER and NOT in Wuhan, ongoing Cambridge study indicates.” ကို #Htayoung, #OungMarine ဆီလျော်အောင် ကောက်နှုတ်ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ အကြောင်းအရာတူ ဖြည့်စွက်ချက်များမှာ ပေးထားပါ Link များအတိုင်းဖြစ်သည်)))
Previous Previous post: Covod-19 ကူးစက်ကပ်ရောဂါဖြင့် ၁-နှစ်အတွင်း အာဖရိကတိုက်နေ လူ ၃.၃-သန်း သေဆုံးနိုင်ကြောင်း ကုလအေဂျင်စီ ခန့်မှန်း၊ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ ၁၂၃-သန်းခန့် တွေ့ရှိမည်၊ လူ ၂.၃ သန်းခန့် ဆေးရုံတင် ကုသပေးရပြီး၊ ၂၉-သန်းမှာ အလွန်အမင်း ဆင်းရဲမွဲတေသွားနိုင်။
Next Next post: ရေခြားမြေခြားတွင် သောင်တင်နေသော မိမိတို့နိုင်ငံသား ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအား အစိုးရက ကယ်ဆယ်ရန် နီပေါတရားလွှတ်တော်ချုပ် အမိန့်ချမှတ်။